Asi unofanira kuenda kupi? Kana nguva kana yako zvegumi zvenyu yokutanga, kungoitira Vhoriyamu nezvitima iripo kungaita kushushikana, kuvhiringidzika, uye kutya zvachose kurasikirwa. vanonetseka kwete – nekuti isu taunganidza pano bhakiti rondedzero ye 5 yakanakisisa misorowo European kuenda nechitima. Gara pasi, bhande epazvigaro, uye kunze nzvimbo yakanakisisa baguettes romuFrance, nekuti tiri kuenda chokufambisa.
Ehe saizvozvo, Paris kunopfuura guta rayo centre. The vaizvambarara guru musha vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri, izvo zvinoreva unogona kupedza mavhiki pano pasina scratching pemvura chii chinofanira kupfupiro zvechokwadi. Getaway kuti zuva rwendo kubva vazhinji panguva Pont Alexandre III uye musoro Versailles, apo Royal Palace achiri anotonga mukuru pasinei kwayo nzvimbo kubvira muma1700. Day matikiti inongova € 20 uye anosanganisira mukova kuna Palace, iwo Mapindu, uye zvakawanda. Even nani, nezvitima vanomhanya kubva peguta zvakananga Palace, izvo kunoita kuwana ikoko mhepo. interconnectedness ichi pamutemo zvinoita Paris mumwe wedu yemisoro yakanakisisa European kuti chitima nzendo.
Mumwe wangu pachake chandinodisisa maguta uye zvadzo maawa maviri kubva Paris riri guta guru United Kingdom: London. Izvi utsotso muhari Mutsika iri musha ane whopping vanhu mamiriyoni mapfumbamwe kuti kubva zvose inofamba upenyu. Kubva POSH Chelsea kune simba Sohõ, iwe unozowana zviitiko kune wese munhu kumabiko ako. Hove imwe achangobuda musicals vasati vakananga pamusoro Shakespeare raMwari Globe uye kupedza usiku chako Shard, chirefu kupfuura shongwe muLondon.
Iyo yeEurostar yekumhanyisa chitima inokutora iwe kubva kuParis kuenda kuLondon pakati mumaawa anopfuura maviri chete, izvo zvinoreva uchaita vasapedza nguva rokufambira uye yakawanda nguva adventuring. saka, tinofunga London kuva mumwe yakanakisisa European misoro kuenda nechitima.
Akasiyana Western misoro European, Prague ndiro guru Czech Republic muna Eastern Europe uye kumwe maguta akakurumbira Central European. Home kune imwe zvikuru mumaraibhurari vakakurumbira munyika, ari Klementium, Prague showcases tsika yayo kumativi ose pakona. Vanoshanyira Astronomical Clock, mukuru uchishandisa wachi munyika. Tora kufamba-famba uchitenderera Old Town Square, apo cobblestone migwagwa uye pedestrianized Lanes zvinorevei unogona kupedza maawa mbeya pasina kunetseka.
Europe inzvimbo yakakura uye dzakasiyana iyo Union zvinoreva kuti zviri nyore kupfuura nakare kose nechitima. Shandisa borderless nyika kuenda misoro izvi kare pamusoro nguva yako. Tisangosiya nomusoro yendege uye ayo vazhinji uye overpriced ndege zvokudya uye kushandisa chitima kuenda parwendo. Ungave kusvetukira pepuranga rimwe remunharaunda nzira kana kupedza zvishoma zvokuwedzera vapamatunhu-nokukurumidza njanji, uchaita kunakidzwa njanji rwendo, kuona nzvimbo, uye zvimwe zvakawanda.
Tine iwe akafukidza zvedu mazano okufambisa. Zvino nguva bhuku imwe chitima matikiti! Save A Train inzvimbo yekutenga matikiti ezvitima.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Best European Capitals To Travel By Train” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-capitals-travel-train%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)